Intel i9 inoshanda zvirinani paWindows 10 pane Linux. Ichi ichokwadi here? | Linux Vakapindwa muropa
Kunyangwe muzuva rangu zuva nezuva ini ndichishandisa Linux zvakanyanya, ini ndiri mushandisi weaya matatu makuru masisitimu anoshanda. Ini ndichine iMac yekare, ini ndine laptop ine Windows 10 uye Kubuntu pane yangu nyowani laptop, iyo yandinowedzera Manjaro iyo yandinoshandisa pane pendrive pane imwecheteyo laptop iyo yandinayo Microsoft's system yakaiswa. Kwandiri, imwe yeakasimba mapoinzi eLinux ndiyo "inomhanya", uye ndakaiisa mumakotesheni nekuti izvozvi iri kuona kuti Intel i9 inokurumidza paWindows 10 pane Linux.
Ndakaverenga chirevo ichi pakati Tom HARDWARE, uye pane chimwe chinhu chakabata pfungwa dzangu kubva pakutanga: »Linux»? Chii chinonzi "Linux"? Ndiko kutanga. Kunyangwe vazhinji vedu tichireva kernel-based masisitimu akagadzirwa naLinus Torvalds se "Linux," masisitimu ari GNU / Linux, iyo yekupedzisira iri iyo kernel yakagovaniswa nemazhinji masisitimu anoshanda. Ie: Ubuntu iLinux, asi Linux haisi Ubuntu. Uye ndiyo Canonical system iyo yavakashandisa kuyedza.
1 Zviratidzo zvirinani muWindows 10 pane muBuntu 20.10, zvese neIntel i9
2 Linux haisi "sisitimu inoshanda"
3 Chokwadi, kana komputa yako ine simba ...
Zviratidzo zvirinani muWindows 10 pane muBuntu 20.10, zvese neIntel i9
Chinyorwa chekutanga chakanyorwa naMichael Larabel pa Phoronix, uye kupinda kwayo kune musoro usiri kutsausa: «Windows 10 inorova Ubuntu paCore i9 11900 yemamwe mabasa«. Pano isu tine yekutanga dudziro: izwi rekuti "vamwe" ≠ "ese". Uye zvakare, iyo Ubuntu iyo yawakashandisa mukuyedza inoshandisa Linux 5.12, kernel iyo parizvino iri kuvandudzwa uye iyo 7th Release Candidate ichiri kufanira kugadzirisa, kusvika padanho rekuti haina kutongwa kunze kuti kuburitswa kwayo kuchanonoka kwevhiki.
Kune zvese zvimwe zvinhu, mune ese ari maviri mashandisirwo emidziyo akashandiswa, zvikasadaro zvaisazoita chero pfungwa: komputa ine i9-119000K, 32GB ye3200MHz RAM uye 1TB yekuchengetedza SSD. Tichitarisa iyo data, ichokwadi kuti Windows 10 iri kumberi mune mamwe mabasa, senge kushandisa Blender 2.92, Crafty 25.2 kana IndigoBench 4.4, asi iri kumashure muSelenium, encoding iyo WebP mufananidzo kana Zstd compression. Nezve izvi mabhenji, Window 10 Pro inokunda muna 61.5% yemabasa, nepo Ubuntu ichizviita mu38.5%.
Linux haisi "sisitimu inoshanda"
Linux haisi "sisitimu inoshanda." Sezvatakatsanangura kare, kuti isu tichireva kwavari seizvi hazvireve kuti isu tinogona kuita sezvatinoita neWindows kana macOS, uko kune iriko hurongwa hunovandudzwa nguva nenguva. Naizvozvo, tinogona kutaura kuti yazvino "kuvaka" kwe Windows 10 Pro inokurumidza kupfuura yekupedzisira yeUbuntu, asi uchifunga kuti a kernel vhezheni iyo isina kuburitswa zviri pamutemo.
Zvakare, zvakare iwe unofanirwa kufunga nezvekuti ese mashandiro masisitimu anofamba. Pane imwechete laptop ini yandinayo Windows 10 Pro uye shandisa Manjaro, ini ndinoshandisawo Ubuntu 20.10 mu USB, uye mabhenji acho chinhu chinoshanda sereferenzi, asi handicho chete chinhu chakakosha. Kuvhura chikumbiro mangwanani uye kusamirira chinguva zvine basa, uye icho chinhu chandinoona muManjaro, iri Linux, uye muUbuntu, uye ini handitombozviona mukati Windows 10.
Chokwadi, kana komputa yako ine simba ...
Patinoshandisa kombiyuta ine simba, iyo inoshanda sisitimu, maererano nekumhanya kwayo, ingangoita haina basa kwatiri. Windows ichafamba zvakanaka uye mashandiro anovhurika nekukurumidza, asi zvinhu zvinoshanduka kana tikashandisa kakombuta kakangwara, sezvazviri nelaptop yangu ine Intel i3, 4GB ye RAM uye 512GB HDD, havazi vese vedu vanogona kana kuda Intel i9. Zvakadaro, ini ndinopokana kuti Microsoft's system ichachengetedza mashandiro ayo mushure memakore mashoma, chimwe chinhu chinoitwa neLinux-based operating system.
Ngazvive sezvazviri, kana isu tikatarisa chete uye zvega pamhedzisiro iyi, uye takamirira Linux 5.12 inoburitswa zviri pamutemo, Windows 10 inokurumidza kupfuura Ubuntu pane Intel i9 komputa. Zvakaoma kutenda, asi ndinovimba kuti ndiani akazviita, kunyangwe ndingade kuona vhidhiyo yakatarwa mukati mawo maapplication anovhurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs Windows » Iyo Intel i9 inoshanda zvirinani paWindows 10 pane Linux. Ichi ichokwadi here?
Ini ndangopedza maawa matatu ndichiisazve WIndows 3 uye kurodha pasi Insider chirongwa chekuvandudza. Ndisati ndaifanirwa kubvisa Ubuntu Studio kubva mudiski nekuti iyo Dual Boot sezviri pachena yakanga isingavabvumidze kuisa. Ino yave nguva yekutangazve uye kumirira kuti ipedze kuiisa kuti vakwanise kushandisa komputa. Ini ndinoona kuti kutora nguva yakareba kupfuura izvo zvinochengetedzwa nekumhanyisa test mabasa muWindows.
Kune rimwe divi, zvichipiwa nhoroondo yekubatana iyo Microsoft neIntel vanayo, chokwadi chekuti Windows yakanga isiri kukurumidza mune ese paramita inotaura zvakaipa nezvekambani.
Hahahaha, iwe wakangondiyeuchidza kuti zvinorema sei kuisirwa Windows, manheru ano ndine chokwadi chekuti ndiri kurota hope dzinotyisa :))
Ini ndinobvumirana newe, Microsoft ine kwese kwese kutsigirwa uye kugadzirisa kwevanogadzira Hardware uye kunyangwe zvakadaro haikunde mumiedzo yese. Kunyangwe fananidzo dzimwe nguva dzisingafadzi izvi zvinounza mupfungwa miviri yevamwe vanogadzira muviri, miviri mikuru, tsandanyama dzakawanda, asi mahormone akawandisa, ipapo chiropa neitsvo kuita shiti (ndiregerereiwo) kubva pakuwanda kwedoping.